CBD र डेल्टा 8 THC को बारे मा चिकित्सा उत्तर
मेडिकल प्रश्न र डेल्टा 8 THC र डेल्टा 10 THC को बारे मा वेब बाट उत्तर
डेल्टा TH THC के हो?
शिशिरा श्रीनिवास द्वारा
नेहा पाठक, एमडी द्वारा चिकित्सकीय समीक्षा जुलाई 08, 2021 मा
लेख मूलतः पोस्ट https://www.webmd.com/mental-health/addiction/what-is-delta-8
यो कसरी नियमित मारिजुआना (डेल्टा -9-THC) तुलना गर्दछ?
के डेल्टा-8 कानूनी हो?
तपाइँ यो कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ?
के तपाइँ THC को लागी सकारात्मक परीक्षण गर्नुहुन्छ?
डेल्टा -8 THC (वा डेल्टा -8-tetrahydrocannabinol) एक स्वाभाविक रूप मा हुने रासायनिक यौगिक एक cannabinoid भांग र भांग (मारिजुआना) बिरुवाहरु मा सानो निशान मा पाइन्छ भनिन्छ। यसको लोकप्रियता वृद्धि मा छ, र तपाइँ यसलाई बुटीक झार औषधालयहरु बाट सुविधा स्टोर अलमारियों को लागी जताततै पाउन सक्नुहुन्छ।
किन त्यहाँ डेल्टा -8 को लागी यस्तो बढ्दो माग छ? शुरुवात को लागी, यसको रासायनिक संरचना यसको प्रसिद्ध चचेरा भाई, डेल्टा -9-tetrahydrocannabinol (डेल्टा -9-THC) को समान छ, मारिजुआना मा पाइने मुख्य साइकोएक्टिभ यौगिक। त्यो हो कि तपाइँ "उच्च" पाउनुहुन्छ।
दुबै डेल्टा -8 र डेल्टा -9 THC का रूपहरु हुन्। तर जब मानिसहरु THC लाई सन्दर्भ गर्छन्, उनीहरु सामान्यतया डेल्टा -9 को मतलब गर्छन् जुन मारिजुआना मा उच्च सांद्रता मा पाईन्छ। दुबै एक खुसी, फजी भावना को उत्पादन, तर डेल्टा -8 एक हल्का उच्च कारण।
वास्तव मा, डेल्टा -8 लाई अक्सर "मारिजुआना-लाइट" वा "आहार झार" को रूप मा उल्लेख गरीन्छ। अन्य सामान्य THC साइड इफेक्ट जस्तै व्यामोह, चिन्ता र निन्द्रा पनि कम शक्तिशाली छन्।
डेल्टा 8 THC कानूनी छ?
डेल्टा 8 को बढ्दो लोकप्रियताको अर्को कारण यो हो कि, भारी विनियमित THC को विपरीत, डेल्टा 8 धेरैजसो राज्यहरुमा प्रयोग गर्न कानूनी छ। यो किनभने यो ज्यादातर हेम्प व्युत्पन्न CBD बाट निकालीएको हो, जो अमेरिका भरि खेती को लागी कानूनी छ
तर डेल्टा-8 एक कानूनी खैरो क्षेत्रमा बस्छ। हेम्पको वैधानिकता तथाकथित संघीय फार्म बिल (2018 को कृषि र पोषण सुधार अधिनियम) बाट उत्पन्न हुन्छ, जसले हेम्प र यसको उप-उत्पादनहरु लाई नियंत्रित पदार्थहरुको सूची बाट हटायो। कारण: हेम्प को कम THC स्तर (०.३%भन्दा कम)। विधेयकमा कहीं पनि डेल्टा mention को उल्लेख छैन। हेम्प अधिवक्ताहरु र अन्य जो यो बेच्ने कानूनी रूप मा डेल्टा -0.3 उत्पादनहरु को बजार मा यो छुटकारा को उपयोग गरीएको छ, सामान्यतया कुनै उमेर प्रतिबन्ध बिना। नतिजाको रूपमा, यो अब भांग उद्योग बाट सब भन्दा छिटो बढ्दो उत्पादन हो। तपाइँ यहाँ तपाइँको राज्य को कानूनी स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुन्छ: https://redemperorcbd.com/is-delta-8-thc-legal-in-my-state/
किनभने त्यहाँ थोरै निरीक्षण वा ल्याब परीक्षण के हो डेल्टा -8 उत्पादनहरु मा जान्छ, रसायनज्ञ र अन्य वैज्ञानिकहरु लाई सुरक्षा चिन्ता छ। डेल्टा-8 को रूपमा लेबल गरिएका उत्पादनहरु THC को उच्च स्तर सहित अशुद्धता हुन सक्छ। नतिजाको रूपमा, न्यूयोर्क र सह सहित एक दर्जन राज्यहरु को आसपास
तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ डेल्टा 8 THC उत्पादनहरु ग्यास स्टेशनहरु, सुविधा स्टोरहरु, झारपात, र vape पसलहरु, र अनलाइन मा काउन्टर मा। तिनीहरू gummies, candies को रूप मा बेचिन्छन्, डेल्टा 8 vape कारतूस, तेल, टिंचर, खाद्य, जोर्नी, वा पेय पदार्थ।
यो नोट गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि त्यहाँ यी उत्पादनहरु र तिनीहरुको अवयव सूची को लागी कुनै गुणस्तर नियन्त्रण छैन। यो सीबीडी को लागी डेल्टा -8 उत्पादनहरु लाई भ्रमित गर्न को लागी सजिलो छ, जो एक उच्च कारण छैन।
डेल्टा 8 Gummies 59.99 बिक्री मा 39.99 को लागी 14 दिन पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी अर्डर गर्न तस्वीर मा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यहाँ पनि अनुसन्धान र प्रमाण को कमी छ जब यो तपाइँको समग्र स्वास्थ्य मा डेल्टा -8 को प्रभाव को लागी आउँछ। धेरै मानिसहरु लाई रिपोर्ट गरिएको छ-ज्यादातर सोशल मिडिया पोस्टहरु को माध्यम बाट-कि उनीहरु डेल्टा 8 को उपयोग उनीहरुको नुस्खा औषधि संगै अवसाद र पदार्थ को उपयोग मा मद्दत गर्न को लागी। प्रयोगकर्ताहरु भन्छन् डेल्टा -8 पनि सक्छ:
दुखाइ कम गर्न सजिलो
मानसिक स्वास्थ्य बढाउनुहोस्
क्यान्सर उपचार को समयमा उल्टी रोक्नुहोस्
जे होस्, विशेषज्ञहरु भन्छन् कि यी लाभहरु धेरै जसो मुख को शब्द हो र त्यहाँ कसरी यो तपाइँको स्वास्थ्य लाई असर गर्दछ मा अनुसन्धान को कमी छ। केवल किनकि तपाइँ यसलाई शेल्फ बाट किन्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब यो छैन कि यो बिल्कुल जोखिम मुक्त छ।
केहि मानिसहरु लाई साइड इफेक्ट को रिपोर्ट गरीएको छ जस्तै:
ढिलो मुटुको दर (bradycardia)
छिटो मुटुको दर (tachycardia)
कम रक्तचाप (हाइपोटेंशन)
यदि तपाइँ डेल्टा -8 उत्पादनहरु को प्रयास र यी प्रतिक्रियाहरु को कुनै पनि नोटिस, तुरुन्तै तपाइँको डाक्टर बताउनुहोस्। यदि यो एक आपतकालीन हो, 911 मा कल गर्नुहोस् वा तपाइँको नजिकैको अस्पतालमा जानुहोस्। यदि एक बच्चा खान्छ वा डेल्टा -8 उत्पादनहरु, gummies वा कैंडीज जस्तै उजागर छ, तत्काल चिकित्सा हेरचाह पाउनुहोस्।
यो भर पर्छ। डेल्टा -8 THC को एक रूप हो। औषधि परीक्षण अक्सर डेल्टा -9 को निशान को लागी हेर्छन्, तर डेल्टा -8 THC को लागी एक सकारात्मक को रूप मा देखाउन सक्छ। चाहे यो डेल्टा -8 हो वा डेल्टा -9, मानिसहरु लाई पनि फरक फरक प्रतिक्रिया हुन्छ cannabinoids उनीहरुले प्रयोग गर्ने उत्पादनहरु को प्रकार को आधारमा र उनीहरु कती लामो समय सम्म उनीहरुको लागी प्रयोग गर्छन्।
हाल, व्यावसायिक मूत्र औषधि परीक्षण फरक cannabinoids को बीच फरक छैन। तेसैले यदि तपाइँ एक औषधि परीक्षण आउँदैछ, यो डेल्टा -8 उत्पादनहरु बाट बच्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ।
WebMD मेडिकल सन्दर्भ
CBD को बारे मा वेब भर बाट चिकित्सा उत्तर
मूल रूप मा पोस्ट। https://collegian.csufresno.edu/2020/10/8-common-questions-and-answers-about-cbd-and-medical-marijuana/#.YSV07vpKg2w
मनोरन्जन र चिकित्सा मारिजुआना बढ्दो देश भर मा राज्यहरु मा कानूनी बन्ने संग, तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ यदि र जब तपाइँको राज्य अर्को हुनेछ। मारिजुआना वरपरको कुराकानी संगै हालैका वर्षहरुमा यति धेरै कर्षण प्राप्त गरीरहेको छ, मानिसहरु भांग को लागी आफ्नो रुख र यसको एक धेरै लोकप्रिय cannabinoids - cannabidiol (CBD) लाई नरम बनाएका छन्।
समग्र स्वास्थ्य बढ्दो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ र भांग संस्कृति लोकप्रिय क्षेत्र मा व्याप्त छ, त्यहाँ अमेरिकी समाज मा भांग को स्थान को बारे मा चारैतिर घुम्ने प्रश्नहरु धेरै छन्। चिकित्सा मारिजुआना र CBD उत्पादनहरु को बारे मा केहि सामान्य प्रश्नहरु को उत्तर पाउन को लागी पढ्न जारी राख्नुहोस्।
जनताको दिमागमा चलिरहेको सबैभन्दा सामान्य प्रश्नहरु मध्ये एक "CBD के हो?" जो मानिसहरु यो संग परिचित छैनन् र मात्र जान्दछन् कि यो भांग बाट आउँछ अक्सर यो tetrahydrocannabinol (THC) संग भ्रमित हुन्छ, जो मारिजुआना मा पाइने उच्च उत्प्रेरित cannabinoid हो।
मानिसहरुको दिमाग मा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सीबीडी उत्पादनहरु यो हो कि होईन कि उनीहरु तपाइँलाई उच्च प्राप्त गर्दछन्। यसको सरल जवाफ हैन। जे होस् यो एक क्यानाबिनोइड हो, यसले तपाइँलाई उच्च तरीकाले घाँटी गर्दैन। वास्तव मा, यो वास्तव मा THC प्रतिकार गर्दछ।
के मारिजुआना संघीय स्तर मा कानूनी छ?
विगत पाँच बर्षहरुमा, त्यहाँ धेरै राज्यहरु चिकित्सा र मनोरन्जन को उपयोग को लागी मारिजुआना को वैधता दिईएको छ। झारप्रतिको दृष्टिकोणमा यो परिवर्तनले धेरै भांग उत्साहीहरुलाई आशा दियो कि झार संघीय स्तर मा वैधानिक हुनेछ, तर यो अझै भएको छैन।
जबकि धेरै राज्यहरु चिकित्सा मारिजुआना साथै मनोरञ्जन मारिजुआना कानूनीकृत छ, यो अझै पनि संघीय स्तर मा अवैध छ। यस कारणले गर्दा, राज्यहरु मा धेरै उद्यमीहरु जहाँ मारिजुआना कानूनी हो क्याना-व्यवसाय मा जाने बारे skittish छन्।
CBD के गर्छ?
जबकि त्यहाँ धेरै बज भएको छ, त्यहाँ अझै पनी धेरै मानिसहरु जो CBD को उपयोग को स्वास्थ्य लाभ को बारे मा अनजान छन्। Cannabidiol जस्तै पुरानो दुखाइ र टाउको दुखाइ को रूप मा धेरै रोगहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ। मानिसहरु यो सोरायसिस र एक्जिमा को लागी सामयिक क्रीम मा प्रयोग गर्छन् किनकि यो सूजन संग मद्दत गर्दछ। केहि विशेषज्ञहरु लाई विश्वास छ कि यो अवसाद र चिन्ता को लागी एक प्रभावी उपचार हुन सक्छ।
तपाइँ सीबीडी उत्पादनहरु कसरी लिनुहुन्छ?
त्यहाँ यो पूरक लिने तरिका को एक किस्म छ। जे होस् यसले तपाइँलाई उच्च तरीकाले झारपात गर्दैन, केहि मानिसहरु यो चिन्ता को उपचार को लागी एक तरीका को रूप मा धूम्रपान गर्न छनौट गर्नुहोस्। CBD बूँदहरु जो यो गठिया र पुरानो दुखाई को उपचार को लागी प्रयोग को बीच लोकप्रिय छन्। केहि मानिसहरु यसलाई सब्जी र मूंगफली को तेल को एक विकल्प को रूप मा आफ्नो खाना पकाउने मा एक घटक को रूप मा प्रयोग गर्छन्। तपाइँ पनि यो पूरक एक टिंचर वा एक सामयिक साल्व को रूप मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
4. मेडिकेयर CBD उत्पादनहरु कभर गर्दछ?
अर्को आम प्रश्न जो मानिसहरु संग छ "मेडिकेयर मेडिकल मारिजुआना कभर गर्दछ?" तपाइँ पहिले पढे जस्तै, मारिजुआना अझै संघीय स्तर मा अवैध छ र चिकित्सा एक सार्वजनिक बीमा विकल्प हो, यो चिकित्सा मारिजुआना कभर गर्दैन।
ईमानदारीपूर्वक, तपाइँ एक बीमा प्रदायक जो तपाइँको मारिजुआना नुस्खा कभर हुनेछ पत्ता लगाउन समस्या हुन सक्छ। मारिजुआना को उपयोग को आसपास कलंक को कारण, यो सायद केहि समय पहिले बीमा कम्पनीहरु त्यहाँ जाने उद्यम हुनेछ। तेसैले, कुनै पनी मेडिकल मारिजुआना वा CBD उत्पादनहरु को उपयोग गर्नु भन्दा बाहिर को पकेट लागत मा विचार गर्नुहोस्।
5. मेडिकल मारिजुआना को लागी निर्धारित छ?
यो तथ्य को बावजुद कि मारिजुआना को उपयोग केहि द्वारा frowned छ, यो रोगहरु को एक लामो सूची को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ, केहि शारीरिक र केहि मानसिक। डाक्टरहरु यसलाई सिजोफ्रेनिया, क्यान्सर, भूख हानि, अनिद्रा, बरामदगी, मांसपेशी ऐंठन, र दुखाइ व्यवस्थापन को लागी प्रयोग गर्दछ।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम सीबीडी। ..79.99 को बिक्रीमा ४। .49.99 मा
यदि म मेडिकल मारिजुआना प्रयोग गर्छु भने के म जागिर पाउन सक्षम हुनेछु?
बिरामीहरु जो मेडिकल मारिजुआना मा छन् को लागी एक ठूलो चिन्ता हो कि छैन यो उनीहरुको जागिर योग्यता लाई प्रभावित गर्दछ। व्यवसायहरु लाई यसको लागी परीक्षण गर्न को लागी अनुमति दिईन्छ र मारिजुआना को उपयोग को लागी रोजगार बाट मानिसहरुलाई अयोग्य ठहरिन्छ, चिकित्सा मारिजुआना पनि। यदि तपाइँ घर मा चिकित्सा मारिजुआना को उपयोग गरीरहनुभएको छ, तब सबैभन्दा राम्रो कुरा तपाइँ गर्न सक्नुहुन्छ कहिल्यै उच्च काम गर्न वा आउन कि तपाइँ मारिजुआना को उपयोग गर्न दिनुहोस्।
के CBD एक उपचार को रूप मा FDA अनुमोदन छ?
CBD उत्पादनहरु अझै सम्म कुनै रोग वा रोग को उपचार को लागी FDA द्वारा परीक्षण गरीएको छैन। यसको मतलब यो होइन कि CBD प्रभावकारी छैन - यसको मतलब यो हो कि मानिसहरुलाई निदान वा कुनै रोग को उपचार को क्षमता को बारे मा चिकित्सा दावी गर्न को लागी अनुमति छैन। जे होस् तपाइँ काउन्टर मा सजीलै CBD किन्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ अझै पनी दुखाइ वा कुनै अन्य चिकित्सा मुद्दा को लागी यो प्रयोग गर्नु अघि तपाइँको चिकित्सक संग परामर्श गर्नु पर्छ।
के CBD तेल छाला को लागी राम्रो छ?
मूलतः https://www.medicalnewstoday.com/articles/cbd-oil-for-skin मा पोस्ट गरियो
यो काम गर्छ?
Cannabidiol (CBD) एक प्राकृतिक भांग बिरुवा बाट व्युत्पन्न यौगिक हो। केहि प्रमाणहरु बताउँछन् कि CBD तेल छाला स्वास्थ्य को लागी लाभदायक हुन सक्छ र छाला को अवस्था को एक किसिम को लागी प्रयोग गरीएको छ।
CBD एक रासायनिक यौगिक मा उपस्थित छ भांग साटिवा बिरुवा। निर्माताहरु सीबीडी तेल बनाउन को लागी एक तेल, जस्तै हेम्प वा नरिवल तेल, संग जोड्न सक्छन्। मानिसहरु सीबीडी तेल वा सौन्दर्य उत्पादनहरु कि सीबीडी तेल आफ्नो छाला मा प्रयोग गर्न को लागी एक दायरा किन्न सक्छन्।
यसको सम्भावित विरोधी भड़काऊ गुण को कारण, सीबीडी मुँहासे, एक्जिमा, र छालरोग सहित धेरै छाला को अवस्था को उपचार को लागी उपयोगी हुन सक्छ।
यस लेखमा, हामी सीबीडी तेल के हो, के छाला को अवस्था को लागी यो उपयोगी हुन सक्छ, र कसरी सीबीडी तेल को उपयोग गर्ने बारे मा छलफल गर्नेछौं।
के CBD कानूनी हो? 0.3% THC भन्दा कम संग हेम्प व्युत्पन्न CBD उत्पादनहरु संघीय कानूनी छन् तर अझै पनी केहि राज्य कानूनहरु अन्तर्गत अवैध छन्। भांग बाट व्युत्पन्न CBD उत्पादनहरु, अर्कोतर्फ, संघीय रुपमा अवैध छन् तर केहि राज्य कानूनहरु अन्तर्गत कानूनी छन्। स्थानीय कानून को जाँच, विशेष गरी जब यात्रा। साथै, ध्यान राख्नुहोस् कि खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) nonprescription CBD उत्पादनहरु लाई अनुमोदन गरेको छैन, जुन गलत लेबल हुन सक्छ।.
CBD तेल के हो?
CBD भांग बिरुवा मा पाइने धेरै cannabinoids को एक हो। अर्को उल्लेखनीय cannabinoid डेल्टा -9-tetrahydrocannabinol (THC) हो। THC कम्पाउन्ड "उच्च" को लागी जिम्मेवार छ कि मानिसहरु भांग संग जोडिन सक्छन्। CBD एक्लै एक व्यक्ति उच्च महसुस गर्न को लागी कारण हुनेछैन।
CBD र THC को बीच मतभेद को बारे मा यहाँ जान्नुहोस्।
भांग बिरुवाहरु को विभिन्न किस्महरु cannabinoids को विभिन्न स्तरहरु हुन्छन्। सामान्यतया, हेम्प बिरुवाहरु धेरै सीबीडी र लगभग कुनै THC, जसको कारण धेरै सीबीडी तेल औद्योगिक हेम्प बाट आउँछ।
भांग CBD र भांग CBD बीच मतभेद को बारे मा यहाँ जान्नुहोस्।
सामान्यतया, निर्माताहरु भांग बिरुवा बाट सीबीडी निकाल्न को लागी गर्मी को उपयोग र सीबीडी तेल उत्पादन गर्न एक वाहक तेल संग मिश्रण हुनेछ। अरु एक बनाउन को लागी रक्सी को उपयोग गर्न सक्छन् CBD टिंचर.
सीबीडी तेल धेरै फरक शक्तिहरु मा आउँछ, र मानिसहरु यसलाई धेरै फरक तरिका मा उपयोग गर्न सक्छन्। उदाहरण को लागी, उनीहरु यसलाई सीधै छाला मा लागू गर्न सक्छन्, आफ्नो जिब्रो मुनि एक थोपा राख्न, वा क्रीम वा लोशन मा यो थप्न सक्नुहुन्छ।
मानव शरीरमा न्यूरोट्रान्समिटर र क्यानाबिनोइड रिसेप्टर्स को एक जटिल नेटवर्क हुन्छ जुन endocannabinoid रिसेप्टर प्रणाली (ECS) को रूप मा जानिन्छ।विश्वसनीय स्रोत। अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि क्यानाबिनोइड्स र ईसीएस धेरै शारीरिक प्रक्रियाहरु मा एक भूमिका निभाउन सक्छ र छालामा विश्वसनीय हुन्छ मुहान cannabinoid रिसेप्टर्स।
के यो छाला को लागी काम गर्दछ?
अनुसन्धानविश्वसनीय स्रोत सुझाव दिन्छ कि CBD तेल बिभिन्न छाला को अवस्था को एक संख्या को लागी लाभदायक हुन सक्छ। यी समावेश हुन सक्छन्:
मुँहासे सबैभन्दा सामान्य छाला को अवस्था विश्वसनीय छ मुहान मानिसहरुमा। CBD तेल कम गर्ने, विरोधी भडकाऊ, र antimicrobial गुणहरु कि मुँहासे सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ संग धेरै यौगिकहरु छन्।
एक 2014 अध्ययन विश्वसनीय मुहान मानव sebocytes मा CBD को प्रभाव अन्वेषण। यी कोषहरु छन् कि sebum सिर्जना, जो एक मोमी, तेल पदार्थ छाला को उत्पादन हो।
जबकि sebum हाम्रो छाला को सुरक्षा मा मद्दत गर्दछ, अत्यधिक sebum पनि मुँहासे मा परिणाम हुन सक्छ। अध्ययनले संकेत गर्दछ कि CBD ले sebocytes लाई धेरै sebum बनाउन बाट रोक्न सक्छ।
एक 2016 समीक्षा विश्वसनीय मुहान भांग बिरुवा को सम्भावित जीवाणुरोधी र एन्टिफंगल गुण नोट गर्दछ। यो छाला मा संक्रमण को कारण मुँहासे रोक्न मद्दत गर्न सक्छ।
एक २०१ study को अध्ययनले सुझाव दिन्छ कि सीबीडी मुँहासे दाग को उपस्थिति को उपचार को लागी पनि लाभदायक हुन सक्छ।
CBD र मुँहासे को बारे मा यहाँ जान्नुहोस्।
सुख्खापन र खुजली
A २०१ study को अध्ययन भरोसा गरियो मुहान ध्यान दिनुहोस् कि CBD छाला को अवस्था, जस्तै सूखापन र खुजली को केहि सामान्य लक्षणहरु को उपचार को लागी उपयोगी हुन सक्छ। विरोधी भड़काऊ गुणहरु मा भरोसा छ मुहान CBD को एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, र छालरोग को सम्भावित ट्रिगरहरु लाई कम गर्न को लागी विशेष गरी उपयोगी हुन सक्छ।
सीबीडी तेल छाला शान्त र जलन को उपस्थिति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ, यो संवेदनशील छाला संग मानिसहरु को लागी उपयोगी हुन सक्छ।
सीबीडी र छालरोग को बारे मा यहाँ जान्नुहोस्।
सीबीडी उमेर र झुर्रियों को लागी
एक 2017 अध्ययन विश्वसनीय मुहान CBD को antioxidant गुणहरु लाई हाइलाइट गर्दछ। oxidative तनावविश्वसनीय स्रोत बुढ्यौली प्रक्रिया को लागी योगदान गर्न सक्छ। तसर्थ, antioxidant र विरोधी भड़काऊ गुणहरु विश्वसनीय मुहान CBD को छाला मा बुढेसकाल को उपस्थिति रोक्न मद्दत गर्न सक्छ।
CBD विरोधी बुढेसकाल क्रीम
भांग बिरुवा जस्तै विश्वसनीय हुन सक्छ मुहान जीवाणुरोधी र एन्टिफंगल गुण, यो छाला मा संक्रमण को उपचार को लागी उपयोगी हुन सक्छ।
CBD मा र अधिक जानकारी र संसाधनहरु को लागी CBD स्किनकेयर उत्पादनहरु, कृपया हाम्रो समर्पित केन्द्र मा जानुहोस्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसारविश्वसनीय स्रोत, मानिसहरु सामान्यतया सीबीडी राम्रो संग सहन। जे होस्, सीबीडी को केहि सामान्य साइड इफेक्ट, जो खुराक मा निर्भर हुन सक्छ, विश्वसनीय समावेश गर्न सक्नुहुन्छ मुहान:
भूख र वजन मा परिवर्तन
यो पनि ध्यान दिन लायक छ कि सीबीडी संग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ विश्वसनीय स्रोत केहि दबाइहरु संग, तेसैले यो महत्वपूर्ण छ कि जो मानिसहरु वर्तमान मा नुस्खा औषधि लिन्छन् कुनै सीबीडी उत्पादनहरु को उपयोग गर्नु अघि आफ्नो डाक्टर संग कुरा गर्नुहोस्।
कुनै पनि सीबीडी उत्पादन संग, यो लेबल र प्याकेजि on्ग मा निर्देशन को पालना गर्न को लागी उत्पादन को उपयोग गर्न को लागी, कती उपयोग गर्न को लागी, र यो कसरी लागू गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ।
मानिसहरु सीबीडी तेल र सीबीडी तेल युक्त सौन्दर्य उत्पादनहरु सीधा छाला मा लागू गर्न सक्छन्।
सीबीडी सामयिक को बारे मा यहाँ जान्नुहोस्।
सीबीडी तेल मौखिक रूपमा लिन को लागी, मानिसहरु आफ्नो जिब्रो को तल केहि थोपाहरु राख्न सक्छन्, जहाँ उनीहरु निगलनु भन्दा पहिले १ मिनेट सम्म तेल समात्न सक्छन्।
खुराक एक व्यक्तिको शरीर को वजन र सीबीडी तेल को शक्ति मा निर्भर गर्दछ फरक हुनेछ। सीबीडी को लागी नयाँ व्यक्तिहरु लाई न्यूनतम संभव खुराक संग शुरू गर्नु पर्छ। एक पटक उनीहरुलाई थाहा छ कसरी उनीहरुको शरीर CBD लाई प्रतिक्रिया गर्दछ, उनीहरु बिस्तारै खुराक बढाउन सक्छन्।
CBD को सही खुराक को बारे मा यहाँ पढ्नुहोस्।
खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए)विश्वसनीय स्रोत हाल सीबीडी उत्पादनहरु लाई विनियमित गर्दैन। तेसैले, हामी सिफारिश गर्दछौं कि मानिसहरु सीबीडी तेल उत्पादनहरु को लागी हेर्नुहोस्:
०.३% भन्दा बढी समावेश छैनविश्वसनीय स्रोत THC, कृषि सुधार अधिनियम अनुसारविश्वसनीय स्रोत
एक आईएसओ/आईईसी 17025 मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा तेस्रो पक्ष परीक्षण को प्रमाण छ
कीटनाशक, भारी धातु, मोल्ड, र जीवाणुहरु को लागी परीक्षण पास
उत्पादन शक्ति मूल्यांकन र सुरक्षा परीक्षण पास
एक कम्पनी एक एफडीए चेतावनी पत्र को बिषयमा विश्वसनीय छैन मुहान
एक कम्पनी हो कि विश्लेषण को प्रमाण पत्र प्रदान (COAs) आफ्नो सबै उत्पादनहरु को लागी
यसको अतिरिक्त, मानिसहरु लाई पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ:
रिटेलर र निर्माता को प्रतिष्ठा
वैकल्पिक प्राकृतिक छाला उपचार
अन्य प्राकृतिक छाला उपचार कि छाला स्वास्थ्य लाभ वा छाला को अवस्था को लक्षणहरु लाई कम गर्न सक्छ:
एलोभेरा एक उत्कृष्ट मॉइस्चराइजर हो र विरोधी भड़काऊ, रोगाणुरोधी, र घाउ निको पार्ने गुण छ। 2014 र 2017 बाट अध्ययन सुझाव छ कि मुसब्बर vera दुवै मुँहासे र छालरोग को लक्षण कम गर्न सक्नुहुन्छ।
एक 2012 समीक्षा विश्वसनीय मुहान नोट छ कि मह मॉइस्चराइजिंग, उपचार, र विरोधी भड़काऊ गुण देखाइएको छ। एक 2016 समीक्षा सुझाव छ कि यो पनि प्रतिरक्षा प्रणाली को बढावा दिन सक्छ, जबकि एक 2017 समीक्षा विश्वसनीय मुहान स indicates्केत गर्छ कि मह जलाउन र घाउ को उपचार गर्न सक्नुहुन्छ।
एक 2016 लेखविश्वसनीय स्रोत बताउँछ कि नारियल तेल सुख्खा छाला को लागी एक प्रभावी उपचार हो, किनकि यो काफी छाला हाइड्रेशन सुधार गर्न सक्छ। २०१ study को एक अध्ययनले यो पनि नोट गर्दछ कि नरिवलको तेलले सूजनको सामना गरेर र छालाको बाधाको स्वास्थ्यमा सुधार गरी छालाको सुरक्षा गर्न सक्छ।
चिया रूख तेल
एक 2013 समीक्षा विश्वसनीय मुहान चिया रूख को तेल को विरोधी भड़काऊ, जीवाणुरोधी, र घाउ निको पार्ने गुण पहिचान गर्दछ। एक २०१५ को समीक्षा नोट छ कि चिया रूख को तेल मुँहासे को लागी एक प्रभावी उपचार हो, हल्का देखि मध्यम मुँहासे संग मान्छे मा मुँहासे घाउ को संख्या कम।
अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि सीबीडी तेल छाला को अवस्था, जस्तै मुँहासे, डर्मेटाइटिस, र छालरोग को एक दायरा को लागी एक उपचार को रूप मा प्रयोग गरीएको हुन सक्छ। यो यसको सम्भावित विरोधी भड़काऊ, जीवाणुरोधी, र antioxidant गुणहरु को कारण हो।
मानिसहरु या त सीबीडी तेल सीधै आफ्नो छाला मा लागू गर्न सक्छन्, यसलाई उपभोग गर्न, वा सामयिक सौन्दर्य उत्पादनहरु, जस्तै क्रीम वा लोशन, जसमा सीबीडी तेल हुन्छ।
* यी कथनहरु खाद्य र औषधि प्रशासन द्वारा मूल्यांकन गरीएको छैन। यी उत्पादनहरु को निदान, उपचार, उपचार वा कुनै रोग को रोकथाम को लागी लक्षित छैन।
डेल्टा 8 THC र डेल्टा 10 THC को बारे मा इन्टरनेट को आसपास बाट मेडिकल उत्तर
डेल्टा 8 THC, डेल्टा 10 THC, CBD, सीबीडी को लागी छालाको हेरविचार र सीबीडी को लागी घरपालुवा जनावरहरु को लागी चिकित्सा गुणहरु को बारे मा WEBMD, चिकित्सा विज्ञान, र यूट्यूब बाट लेख
रातो सम्राट सामूहिक